Windows တွင် SSH Server အား freeSSHd ဖြင့်အသုံးပြုခြင်း
Music & IT Development :: Category :: Knowledge Forum :: Networking Share
Subject: Windows တွင် SSH Server အား freeSSHd ဖြင့်အသုံးပြုခြင်း Thu Jul 15, 2010 6:02 am
command line တွေကိုသုံးပြီး Windows အား အဝေးထိန်း (Remote) Control လုပ်ချင်ပါသလား? SSH Network protocol ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။ Telnet ကိုတော့ Network အကြောင်းကို လေ့လာတဲ့သူတွေ တော်တော်များများသိထားကြပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ Telnet က SSH လောက် လုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ အခု လုပ်ဆောင်ပုံကတော့ အရိုးရှင်းဆုံး Setup လေးတစ်ခုပါပဲ..
ဒါကိုအသုံးပြုပြီး Computer တစ်လုံးကနေ အခြားတစ်လုံးကို command line တွေနဲ့ management လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက copy, edit, move နဲ့ delete စသည်ဖြင့် အိမ်၊ ရုံးမှ ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SSH network protocol က ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။
freeSSHd software ကတော့ Windows အတွက် SSH ကိုအသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံး Software တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ ၄င်း software ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။ Install လုပ်တာကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ... Next Next ပေါ့..
Click Next -> Click Next (or you can change the default installation directory) -> Click Next (Full Installation) -> Click Next (Start Menu Folder) -> Click Next (Createadesktop icon) -> Click Install (ready to install) -> Wait until installation has been finished -> Click Close ဖြင့် ပိတ်လိုက်ပါ။
Installation ပြီးသွားရင် “Do you want to run freeSSHd asasystem service?” ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
ဒါဆိုရင် System Tray ထဲမှာ freeSSHd icon လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်.. ဒါကို Click နိုပ်ပြီး setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါ။
“SSH server is running”. ဆိုတာလေးကိုစစ်ဖို့ Server Status ဆိုတဲ့ tab မှာ စစ်ကြည့်ပါ။
၄င်း နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ Remote user အကောင့်တစ်ခု ဖွဲ့ပေးရပါမယ်...
User ဆိုတဲ့ Tab ထဲ က Add ဆိုတဲ့ button ကို နိုပ်ပြီး အကောင့်တစ်ခုလုပ်ပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ User name ရွေးပြီး Authorization မှာ Password Stored as Sha1 hash ဆိုတာကိုရွေးပြီး password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ user can use: ဆိုတဲ့နေရာမှာ Shell နဲ့ SFTP ဆိုတာတွေကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ဆိုပြီး အကောင့်ဖွဲ့လိုက်ပါ...
ယခု ကျွန်တော်တို့ SSH အသုံးပြုခွင့်ကို စစ်ပါမယ်... ၄င်းအတွက် PuTTY ဆိုတဲ့ Software တစ်ခုကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်...
PuTTY ရဲ့ configuration Setting ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ Remote ယူသုံးမဲ့ စက်ရဲ့ IP Address ကိုထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်.. ပုံမှန်အားဖြင့် SSH ရဲ့ Port က 22 ပါ...
ပြီးရင် Open ဆိုပြီးနိုပ်လိုက်ပါက Alert Box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်.. .
Yes ဆိုတဲ့ button ကိုနိုပ်လိုက်ပါက Login ၀င်ရင်အတွက် Command Prompt တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်...
စောစောက ကျွန်တော်တို့ freeSSHd မှာ အကောင့်တစ်ခု ဖွဲ့တုန်းက user name နဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ SSH server ကို အောင်မြင်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ..
Music & IT Development :: Category :: Knowledge Forum :: Networking